Nkwenye nke Matthew Pt 1, Okwu Mmalite na Echiche Ụgha
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ Nkwenye nke Matiu Nkebi 1, Okwu Mmalite & Echiche Farrer
Nkwenye nke Matiu, Nkebi 1
Matthew nwere ọtụtụ okwu na -etinye ntụkwasị obi ya n'ime ajụjụ. Nke mbụ, a na -enye ndetu mmeghe gbasara Matiu gbasara ihe sitere na ya, onye dere ya, na nhazi ya. Ozizi nke Farrer na -enye echiche ọzọ maka ijide Matthew na enweghị obi abụọ na -eche na ọ nwere ike bụrụ na Luk wepụrụ ọtụtụ ihe na Matiu. Egosiputara nnukwu ihe mgbagwoju anya nke Matiu na ihe ndekọ Oziọma ndị ọzọ na ngalaba na -esonụ. Ọtụtụ n'ime emegiderịta dị n'Agba Ọhụrụ bụ Matiu na -emegide Mak, Luk na Jọn. A kọwara okwu ndị ọzọ dị na Matiu na usoro nke nsogbu na asụsụ na -ekwekọghị ekwekọ gụnyere amaokwu ejiri maka ndị na -ekpe okpukpe ndị Juu na ndị mgbaghara Muslim na -eji. N'ikpeazụ, a na -enye ihe akaebe megide okwu ọdịnala nke Matiu 28:19 nke na -egosi na agbakwunyere usoro baptizim atọ n'ime otu ma emesịa ọ bụghị nke mbụ na Matiu.
Okwu mmeghe gbasara Matthew:
Edere Oziọma Matiu ka edechara Oziọma Mak ma eleghị anya tupu 70 AD (afọ mbibi nke ụlọ nsọ dị na Jerusalem). O doro anya na Matiu dabere na Mak maka ọtụtụ ọdịnaya ya ebe ọ bụ na 95% nke Oziọma Mark dị n'ime Matiu na 53% nke ederede bụ okwu ọnụ (okwu-maka okwu) sitere na Mak. A na -ekwu na Oziọma ahụ sitere na Matiu n'ihi na a na -eche na ụfọdụ ihe pụrụ iche sitere na Matiu (onye na -eso ụzọ Jizọs onye bụbu onye ọna ụtụ) sitere na ya n'agbanyeghị na ọtụtụ ihe sitere na Oziọma Mak dị ka ọtụtụ na -ahụ ya. bụ ihe mkpuchi n'elu Mark. Ihe doro anya bụ na Matiu bụ ngwakọta nke isi mmalite karịa nke otu onye na -eso ụzọ ma ọ bụ isi mmalite. Enyere agwa na Oziọma "dị ka Matiu si kwuo" nke ikpeazụ. Ihe akaebe na -egosi na nna nna Chọọchị nyere Matiu gbatịpụrụ ruo narị afọ nke abụọ.
A naghị ahazi Matiu dịka akụkọ gbasara akụkọ ihe mere eme. Kama, Matiu nwere ngalaba nkuzi na ihe mgbochi ọzọ. Matthew bụ ihe eji arụ ụlọ nke na -egosipụta usoro edepụtara edeziri nke nwere nnukwu nkuzi nkuzi isii. Eleghị anya onye ode akwụkwọ a bụ onye na -eso ụzọ Jizọs nke na -enweghị ahụ iru ala iji okwu “Chukwu”. Iji maa atụ, onye ode akwụkwọ na -agbagharị site na iji okwu a “Chineke” site na iji ahịrịokwu “Alaeze nke eluigwe” ọtụtụ oge megidere “alaeze Chineke” dịka ejiri ya na Mak na Luk. Matiu kwukwara ụfọdụ okwu nke naanị ndị Juu oge mbụ bụ Ndị Kraịst ga -echebara echiche. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta kwenyere na edere Matiu na mbụ n'asụsụ Semitic (Hibru ma ọ bụ Aramaic) ma mesịa sụgharịa ya n'asụsụ Grik. O nwere ike ịbụ na e nwere nsụgharị Matiu ma n'asụsụ Hibru (ma ọ bụ Aramaic) na mgbakwunye na Grik. Ụdị nsụgharị ndị a nwere ike ịdịgasị iche na ibe ha. Akwụkwọ mbụ zuru oke nke Matiu nke fọdụrụ sitere na narị afọ nke anọ.
Ụkpụrụ Farrer dị ka ihe ndabere maka inwekwu obi abụọ n'ebe Matiu nọ:
Echiche Farrer (nke a makwaara dị ka echiche Farrer-Goulder-Goodacre) bụ ozizi na e bu ụzọ dee Oziọma Mak, Oziọma Matiu sochiri ya, onye dere Oziọma Luk werekwa Mak na Matiu mee ihe . Ndị ọkà mmụta Akwụkwọ Nsọ Bekee gụnyere Austin Farrer kwadoro ya, onye dere ya Site n'iji Q na 1955, na ndị ọkà mmụta ndị ọzọ gụnyere Michael Golder na Mark Goodacre. Ozizi Farrer nwere uru nke ịdị nfe, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ka ndị ọkà mmụta mepụta isi mmalite "Q". Ndị na -akwado ozizi Farrer na -enye ihe akaebe siri ike na Luk jiri ma oziọma ndị gara aga (Mak na Matiu) yana na Matiu buru Luk ụzọ.
Nkwụsi ike na isi mmalite "Q" na -esitekarị n'echiche na onye dere Luk agaraghị ewepụ Matthew nke ukwuu ma ọ bụrụ na ọ nwere ike nweta ya dịka isi mmalite. Agbanyeghị, onye dere akwụkwọ Luk matara na enwere ọtụtụ akụkọ tupu ya. Okwu mmalite ya na -egosi mkpa ọ dị, dabere na ntụle ya nke ndị akaebe, inye akụkọ dị n'usoro maka ebumnuche nke inye ihe doro anya gbasara ihe a kuziri. Nke a pụtara na Luk ewezugaghị ọtụtụ ihe na Matiu n'ihi na Matiu nwere ihe merenụ. Ihe ọzọ na -emegide echiche Farrer bụ na a na -ebipụtacha Luk na amaokwu ụfọdụ karịa Matiu, yabụ Luk na -egosipụta ederede ochie. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na Luk na -ezube ịnye akụkọ dị nkenke na n'usoro, ọ yikarịrị ka ọ bụ Luk deziri “ntụpọ” site na amaokwu ndị dị na Matiu dabere n'ihe ọ kwenyere na ọ kacha bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi na ezigbo akaebe nke ihe akaebe dị n'aka ya. Onye dere akwụkwọ Luk gosipụtara mkpali a na okwu mmalite ya:
(Gụọ Luk 1: 1-4.) 1 Ebe ọ bụ na ọtụtụ emeela nchịkọta akụkọ gbasara ihe emezuru n'etiti anyị, 2 dị nnọọ ka ndị ahụ ji anya ha hụ ya na ndị ozi nke okwu ahụ nyefere anyị n'aka anyị site na mbụ. 3 ọ dịkwa m mma, ebe m gbasoro ihe niile nke ọma ruo oge ụfọdụ gara aga, idere gị akụkọ ndekọ aha ọma, Tiofilọs onye ukwu, 4 ka unu wee jide n'aka n'ihe ndị a kuziiri unu.
Arụmụka ndị bụ isi maka ikwere na onye dere Luk nwere ohere nweta Mak na Matiu tupu o dee Luk bụ ndị a:
Ọ bụrụ na Luk agụọla Matiu, ajụjụ ahụ Q na -aza adịghị ebili (e guzobere echiche Q ka ọ zaa ajụjụ ebe Matiu na Luk nwetara ihe ha na -ahụkarị dabere n'echiche na ha amaghị oziọma nke ibe ha).
Anyị enweghị ihe akaebe sitere n'ihe odide Ndị Kraịst oge mbụ na ihe ọ bụla dị ka Q dị adị.
Mgbe ndị ọkà mmụta nwara ịwughachi Q site na ihe ndị dị na Matiu na Luk, nsonaazụ ya adịghị ka ozi ọma, ọ ga -enwekwa akụkọ gbasara ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs ebe ọ gụnyere akụkọ gbasara John Baptist, baptism na ọnwụnwa nke Jizọs. n'ọzara, na ọgwụgwọ ọ gwọrọ onye na -ejere otu narị ndị agha ozi. Theoretical Q agaghị abụ ozioma okwu kama ọ ga -adị oke ụkọ dị ka akụkọ.
Arụmụka kachasị ama maka echiche Farrer bụ na enwere ọtụtụ amaokwu ebe ederede Matiu na Luk kwenyere na ime obere mgbanwe na nke Mak (ihe a na -akpọ omenala abụọ). Nke a ga -esokwa ma ọ bụrụ na Luk na -eji Matiu na Mak, mana ọ siri ike ịkọwa ma ọ na -eji Mark na Ajụjụ Streeter kewaa ndị a ụzọ isii wee chọta echiche dị iche maka nke ọ bụla.
Farrer na -ekwu na “[h] arụmụka na -enweta ike ya n'ime oge ole na ole ekwesịrị ka ewebata echiche ọ bụla; mana ndụmọdụ na -emegide ga -ekwupụta obi ọjọọ na mbelata nke ihe atụ maka echiche nke ọ bụla dabara na mmụba nke echiche onwe ha. Otu enweghị ike ikwu na arịrịọ Dr. Streeter [maka “Q”] enweghị ike ịkwagide ya, mana mmadụ ga -ekwenye na ọ bụ arịrịọ megide ihe akaebe pụtara ìhè ”.
Ọzọkwa, ihe ọ pụtara na onye dere Luk nwere akwụkwọ Matiu mgbe ọ na -ede Luk bụ na ihe dị na Matiu ga -abụrịrị na ọ gbapụrụ n'ọmarịcha akaebe nke ndị ji anya ha hụ ihe na ndị ozi nke okwu ahụ nakwa na ụfọdụ ihe edere na Matiu ga -abụrịrị ihe na -ezighi ezi.
 Gundry, RH (1994). Matthew: Nkọwa na Akwụkwọ ntuziaka ya maka ọgbakọ agwakọtara n'okpuru mkpagbu (mbipụta nke abụọ). Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing Company
 Austin M. Farrer, Na -ekesa ya na Q, na DE Nineham (ed.), Nnyocha na Oziọma ndị ahụ: Edemede na ebe nchekwa RH Lightfoot, Oxford: Blackwell, 1955, p. 55-88,
 Ndị nyere Wikipedia, "echiche efu," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Farrer_hypothesis&oldid=980915501 (enwetara ya na Ọktoba 9, 2020).
 Nchịkọta Michael Goulder nke echiche dị na “Q bụ Juggernaut?”, Journal of Biblical Literature 115 (1996): 667-81, mepụtaghachiri na http://www.markgoodacre.org/Q/goulder.htm
Nkwenye nke Matthew, pdf Download